STEAM_API.DLL NA-EFU ("STEAM_API.DLL NA-EFU NA KỌMPUTA GỊ ..."). IHE Ị GA-EME - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Echere m na ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu maara nke ọma na usoro Steam (nke na-enye gị ohere iji ngwa ngwa zụrụ egwuregwu, chọta ndị nwere mmasị na igwu egwu n'ịntanetị).
Isiokwu a ga-atụle otu njehie na-ewu ewu nke metụtara enweghị ịnweta faịlụ steam_api.dll (ụdị njehie dị na egosi 1). Iji faịlụ a, ngwa Steam na-ejikọta egwuregwu ahụ, ọ bụkwa ihe okike na ọ bụrụ na faịlụ a mebiri (ma ọ bụ ehichapụ), usoro ihe omume ahụ ga-alọghachite njehie "steam_api.dll na-efu na kọmpụta gị ..." (site n'ụzọ, ederede njehie dabere na nsụgharị gị Windows, ụfọdụ nwere ya na Russian).
Ya mere, ka anyi gbalịa idozi nsogbu a ...
Fig. 1. Steam_api.dll na-efu site na komputa gị (na Russian: "faịlụ steam_api.dll na-efu, gbalịa ịtinye ihe omume ahụ iji dozie nsogbu ahụ").
Ihe kpatara iji wepu faịlụ steam_api.dll
Ihe kachasị mkpa maka enweghị faịlụ a bụ:
ntinye nke egwuregwu nke iche iche mgbakọ (na trackers ha na-akpọkarị nwughari). Na mgbakọ ndị dị otú a, a pụghị ịgbanwe faịlụ mbụ, nke bụ ihe kpatara njehie a (ya bụ, ọ nweghị faịlụ mbụ, onye ahụ gbanwere gbanwere "ezughị oke");
Antivirus na-emechi (ma ọ bụ ọbụna na-ezigarantaị) faịlụ enyo (nke a na-akpọkarị steam_api.dll). Karịsịa ma ụfọdụ ndị omenkà gbanwere ya mgbe ị na-eke ihe nwughari - Antiviruses nwere ọbụna obere obi ike na ụdị faịlụ;
mgbanwe faịlụ steam_api.dll mgbe ị na-etinye egwuregwu ọhụrụ (mgbe ị wụnye egwuregwu ọ bụla, karịsịa na enyeghị ikikere, enwere ike ịgbanwe faịlụ a).
Ihe jikọrọ njehie, otu esi edozi ya
N'uche m, ihe kachasị mfe i nwere ike ime bụ wepu Steam site na komputa gị ma weghachite ya site nbudata na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti (njikọ dị n'okpuru ebe a).
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa data gaa Steam, mgbe ị na-ehichapụ gị mkpa idetuo faịlụ "steam.exe" na nchekwa "Steamapps", nke dị n'akụkụ ụzọ: "C: Program Files Steam" (na-emekarị).
Nzọụkwụ nọmba 2 (ọ bụrụ na antivirus gbanyere faịlụ ahụ)
Nhọrọ a bara uru ma ọ bụrụ na antivirus amachibidoro faịlụ gị. Ọtụtụ mgbe, antivirus ga-agwa gị banyere nke a na windo dị egwu.
Ọtụtụ mgbe, na ọtụtụ antiviruses, e nwekwara akwụkwọ ndekọ, nke na-ekwu ihe na mgbe e wepụrụ ya ma ọ bụ wepụ ya. Ọtụtụ mgbe, antivirus na-etinye faịlụ ndị dị otú ahụ na-enyo enyo, n'ime ebe ha nwere ike iweghachite ngwa ngwa ma gosi na ihe omume ahụ na faịlụ ahụ bara uru ma ọ dịghịzi mkpa imetụ ya aka ...
Dịka ọmụmaatụ, ṅaa ntị na onye nchekwa Windows 10 dị na mbụ (lee ọgụgụ nke 2) - mgbe enwere ike ịhụ faịlụ dị ize ndụ, ọ jụrụ ihe ị ga - eme ya:
ehichapụ - a ga-ehichapụ faịlụ ahụ na PC ruo mgbe ebighị ebi ma ị gaghị ahụ ya ọzọ;
kwarantaini - egbochi nwa oge ruo mgbe i kpebiri ihe ị ga - eme ya;
ekwe - onye nche ahụ agakwaghị adọ gị aka ná ntị maka faịlụ a (n'ezie, n'ọnọdụ anyị, ịkwesịrị ikwe ka faịlụ ahụ steam_api.dll arụ ọrụ na pc).
Fig. 2. Onye nchekwa Windows
Ọnụ ọgụgụ nke 3
Ị nwere ike ibudata faịlụ a na Ịntanetị (karịsịa ebe ị nwere ike ibudata ya na ọtụtụ narị saịtị). Mana n'onwe m, anaghị m akwado ya, ma lee ihe kpatara ya:
a maghị ihe faịlụ ị na-ebudata, mana na mberede, ọ gbajiri, nke nwere ike ime ka usoro ahụ ghara ịdị njọ;
ọ na-esi ike ịchọta mbipụta ahụ, mgbe mgbe a na-agbanwe faịlụ ndị ahụ, ma ruo mgbe i buliri ihe dị gị mkpa, gbalịa ọtụtụ faịlụ (nke a na-ebukwa ihe ize ndụ ahụ, lee isi 1);
Ọtụtụ mgbe, tinyere faịlụ a (na saịtị ụfọdụ), a na-enyekwa gị modulu mgbasa ozi, nke ga-emecha kpochapụ kọmputa gị (mgbe ụfọdụ ruo mgbe ị rụgharịrị Windows).
Ọ bụrụ na ebudatara faịlụ ahụ, wee dezie ya na folda ahụ:
n'ihi na Windows 32 bit - na na:: Windows System32 folder;
maka Windows 64 bit - na nchekwa C: Windows SysWOW64 ;
Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa igodo nchịkọta Nweta + R ma tinye iwu "regsvr steam_api.dll" (na-enweghị ruturu, lee Ọgụgụ 3). Mgbe nke ahụ gasịrị, malitegharịa kọmputa gị ma gbalịa ịmalite egwuregwu ahụ.
Site n'ụzọ, maka ndị maara obere Bekee (ọ dịkarịa ala na akwụkwọ ọkọwa okwu), ị nwekwara ike gụọ ndụmọdụ ndị dị na ebe nrụọrụ weebụ steam ọrụ ahụ:
//steamcommunity.com/discussions/forum/search/?q=steam_api.dll+is+missing (ụfọdụ ndị ọrụ ezutewo njehie a ma dozie ya).
Nke ahụ bụ ihe niile, ihe ọma niile na obere ihe nhiere ...